करीब ३९ करोड खराब कर्जा उठाएको डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा ७१ करोडभन्दा बढी
साउन १५, काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ७१ करोड ३७ लाख २९ हजार खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा रू. १५९ दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष कम्पनीले रू. २७ करोड ४९ लाख ९१ हजार खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले रू. ३८ करोड ९८ लाख ९५ खराब कर्जा संकलन गर्न सफल भएको छ । खराब कर्जा संकलन गरेसँगै गत वर्ष कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी करीब ४३ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख १६ हजार भएको छ ।
सम्भावित जोखिम शीर्षकमा गत वर्ष ६६ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी रू. २३ करोड ७३ लाख ९९ हजार छुट्याए पनि गत वर्ष खराब कर्जा संकलनले कम्पनीको नाफा बढ्न सहयोग मिलेको हो ।
गत वर्ष कम्पनीले ६६ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी रू. ७६ करोड ८१ लाख ९१ हजार सञ्चालन नाफा गरेको छ ।
१५ प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाएर रू. १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख ४८ हजार पु¥याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम पनि ५५ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब २९ करोड ४५ लाख ७८ हजार कायम भएको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा १९ दशमलव ६३ प्रतिशत बढी रू. ७ अर्ब ७८ करोड ४० लाख ६ हजार कर्जा सापटी लिएको कम्पनीले साढे ३२ प्रतिशत बढी रू. ६ अर्ब ५४ करोड १७ लाख ६७ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ३१ दशमलव ९० प्रतिशत बढी रू. १५ अर्ब २३ करोड ३८ लाख ४१ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्ष २ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६१ दशमलव ७३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २११ दशमलव ९६ रहेको छ ।